Midowga Musharaxiinta oo hanjabaad ku tilmaamay erayadii Cumar Filish | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharaxiinta oo hanjabaad ku tilmaamay erayadii Cumar Filish
Midowga musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021 ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ayaa hanjabaad ku tilmaamay hadalkii Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharixiinta ayaa si kulul uga hadlay hadal shalay uu jeediyay guddoomiyaha gobolka Banaadir oo u muuqday mid colaad hurin ah sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay Golahan oo lagu dhawaaqay maalin kahor, waxaa eed ballaaran loo jeediyay Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu sheegay qoraalka in ay tahay farriin si toosa uga timid Madaxweynaha.
Golaha Musharaxiinta oo diiddan hannaanka ay dowladda Federaalka ku waddo doorashada la filayo dhawaan in ay ka qabsoonto ayaa waxay shir socday muddo shan cisho ah uga hadlayeen sidii ay ka yeeli lahaayeen iyagoo ugu dambeyn qaatay go'aan, islamarkaana soo saaray war murtiyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa si caro leh uga hadlay shirkii musharaxiinta ee dhawaan ka dhacay Jasiira Hotel, waxa uuna ku hadlay erayo u muuqanayay in ay bannaantahay in la dilo dadkii shirkaas soo abaabulay oo uu ula jeedo golaha musharaxiinta, oo u badan beesha uu kasoo jeedo.
Wareegtadan ayaa dhaliisha loo jeediyay Madaxweyne Farmaajo, "Hoggaanka dowladdu wuxuu adeegsanayaa tabihii Al-Shabaab ee xalaaleysiga dhiigga shacabka" ayaa lagu yiri qoraalka.